ပြည်နယ် ၂၀၂၁ တွင် Google ၏လူကြိုက်အများဆုံး pies - ပြည်နယ်တိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံး V-Day သကြားလုံးဖြစ်သည်
ဤမြေပုံသည်ပြည်နယ်တိုင်း၌လူကြိုက်အများဆုံး pies ကိုပြသည်
ပြည်နယ်တိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံး V-Day သကြားလုံးဖြစ်သည်
နောက်ထပ် Pi Day တစ်ခုထွက်လာပြီ၊ ဒါပေမယ့်သင်ရောက်ပြီ ရန် မှန်ပါတယ် ချစ်သူ နေ့သည် Pi နေ့ဖြစ်သည်။
ချစ်မြတ်နိုးရသည့်အချိုပွဲကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် Google သည်ပြည်နယ်တိုင်း၌ရှာဖွေမှုအများဆုံးပြုလုပ်သောအများဆုံး pies စာရင်းကိုပြုစုခဲ့သည်။
ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွဲခြမ်းနိုင်ရန်အတွက်မြေပုံသည်ကွဲပြားခြားနားသောသော့ချက်ရှိသောeveryရိယာတိုင်းကိုအရောင်ခြယ်ထားသည် သစ်သီးဝလံ pies , custard ခွကေို, အရသာရှိတဲ့ pies , ချောကလက်နှင့်ခွံမာသီး pies နှင့် '' အခြား '' pies အမျိုးအစားများ။ Custard သည်ပြည်နယ်အများစုတွင်အစာစားသောအကောင်းဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းအသီးများသောအသီးများမှာမဝေးလှပါ။
ပြည်နယ် ၅၀ တွင်မည်သည့်ရှာဖွေမှုသည်အများဆုံးသောရှာဖွေမှုကိုမှန်းဆနိုင်ပါသလား။ အရိပ်အမြွက် - အမေရိကန်သည် _____ ___ ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သင်ထင်သည်မှာပန်းသီးပိုင်သည်မြေအောက်ထောပတ်ထောပတ်နှင့်အတူရှာဖွေမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ကွဲပြားသောပြည်နယ် ၅ ခုတွင်ဇယားများကိုထိပ်ဆုံးမှ ဦး ဆောင်ထားသည်။
ဤအတောအတွင်း၊ ပြည်နယ်အချို့ကိုအနိုင်ရသည့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော pies များဖြစ်သည့်နီဗာဒါ၊ မြောက်ဒါကိုတာနှင့်တောင်ဒါကိုတာတို့တွင်အချိုမှုန့်စပျစ်သီးပျဉ်ပုံနှင့်ကော်လိုရာဒိုနှင့် ၀ ါရှင်တန်ရှိကျိုင်းကောင်ပိုင်ဆိုင်တို့ဖြစ်သည်။ ဒီလူကြိုက်များတယ်ဆိုတာဘယ်သူသိလဲ။ ကျိုင်းကောင်ပိုင်မုန့်အကြောင်းကိုသင်မကြားရဘူးဆိုရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ တကယ်တော့, Ree Drummond တစ်အရသာရှိပါတယ် ကျိုင်းပိုင်စာရွက် ငါတို့ရဲ့ခံတွင်းရေကိုအခုလုပ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးဝယ်စာရင်းသို့ Creme De Menthe နှင့် marshmallows များကိုထည့်ခြင်း! ✅နှင့်✅။
ဒီအကြောင်းအရာကို third party မှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီးသုံးစွဲသူများရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကူညီဖို့ဒီစာမျက်နှာကိုတင်သွင်းထားတယ်။ piano.io တွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ဆင်တူသည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်
Marlboro က Man, သင်ဘာလုပ်နေလဲ?
နွေရာသီရုပ်ရှင် Giveaway (ဆုရရှိသူကိုကြေငြာခဲ့သည်)
Tiktok ရှိစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နည်း ၁၀ ခု
ကောင်းကင်တမန်နံပါတ် ၂၇ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
purgatory မှဝိညာဉ် 1000 လွတ်မြောက်ရန်ဆုတောင်းပါ။
ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီး ၇ ယောက် ဟင်းချိုချက်နည်း
convection oven တွင်5ပေါင်ကြက်သားကို မည်မျှကြာအောင် ချက်ပြုတ်ရမည်နည်း။